Owen Hargreaves Oo Magacaabay Xiddiga Uu Frank Lampard Ku Qasban Yahay Inuu Safkiisa Koowaad Ka Mamnuuco - Gool24.Net
Owen Hargreaves Oo Magacaabay Xiddiga Uu Frank Lampard Ku Qasban Yahay Inuu Safkiisa Koowaad Ka Mamnuuco
Owen Hargreaves ayaa rumaysan in Chelsea aanay qaab ciyaareedkeeda ugu fiican soo bandhigin marka ay ku ciyaaraan shaxdii caawa, balse ay tahay inuu Frank Lampard safkiisa hore ka tuuri doono weeraryahanka da’da yar ee Tammy Abraham ee u dhaliyey goolka labaad kulankii ay 2-0 ku garaaceen Newcastle United.
Halyeyga Manchester United ee Owen Hargreaves oo ka hadlayay kulankii ay Blues ku garaacday Newcastle, waxa uu usoo jeediyey Frank Lampard inaanu mar dambe kusoo bilaabin safkiisa Tammy Abraham, kooxdiisuna aanay lahayn qaab ciyaareed dilaa ah marka uu isagu joogo.
Laakiin waxa uu tilmaamay in Christian Pulisic oo dhinaca bidix ka ciyaara iyo Timo Werner oo weerarka tooska ah kusoo laabta ay tahay midda guulaha u keenaysa.
Owen Hargreaves oo hadlayay ayaa yidhi: “Yaa ah ciyaartoyga aan la tuuri karin? Timo Werner ayaa ah mid aan laga tuuri karin safka hore, waxaanay ila tahay inuu yahay ciyaartoy dhab ahaan ku wanaagsan la ciyaarista kooxda kale. Waxaan u malaynayaa inuu sannadkii hore dhaliyey 15 gool, ilamana aha inuu ku helay amaan qaab ciyaareedkiisa. Laakiin waxaan ka helay xaqiiqada baaxaddiisa, farsamadiisa, waxaanu ka wanaagsan yahay dad kale oo la amaano.
“Goolasha waxa uu (Timo) helayaa, kooxda Frank na ugu fiican tahay marka uu Ziyech geeyo dhinac, garabka kalena Pulisic, kaddibna uu Werner joogo afka hore, khadka dhexena Havertz iyo Mount oo isaga ka dambaynaya.
“Taas ayaa ah kooxda ugu wanaagsan ee uu heli karayo. Laakiin Tammy isaguba dhab ahaantii waa ciyaartoy u wanaagsan kooxda.”